IZA SY FIRY AVY NY ANJELY SY ARKANJELY.
TORITENYPosté par Ra-Hiandry jeu., novembre 07, 2013 23:30:27
Ho an'i Teandalina.
Miarahaba anao, ary mirary ny soa sy ny tsara rehetra! Enga anie ny anjely sy ny Arkanjely hitondra hazavana aminao, sy hitondra anao ho amin'ny hazavàna mamirapiratra kokoa hatrany!!!
Miezaka ny hamaly sy hanome taridalana anao arak'izay mba azoko aho.
Ny momba ny fanontanianao, dia araka ny Baiboly hatrany, no amaliantsika azy: satria io moa no fototra iorenan'ny finoantsika.
1°- Voalohany indrindra aloha, ny Baiboly, tsy manavaka hoe ARKANJELY na ANJELY: fa na ao amin'ny Testamenta Taloha, na ny Testamenta Vaovao, dia "ANJELY" daholo no ilazàna azy rehetra ireo.
- Marina fa ao amin-ny Baiboly misy resaka fanahy sy zavamanan-aina hafa. Oh i Md Paoly miresaka "ny fanapahana sy ny fahefana ary ny hery rehetra." (1 Kor 15, 24) Fa sarotra ny milaza hoe ny anjely na ny arkanjely ihany no eritreretin'i Md Paoly amin'ireo.
Asa, mety misy koa aza “catégorie” ambony-mihoatra ny arkanjely, na ambany-latsaka noho ny anjely, fa tsy fantantsika.
- Toy izany koa, " ny fiandrianana rehetra, ny fanapahana rehetra, ny fahefana rehetra, ny fanjakana rehetra, ary ny anarana rehetra azo tononina (Efez 1, 21, Kol 2,10).
Dia diniho tsara ny hoe: “tsy amin'izao fiainana izao ihany [=eto an-tany], fa amin'ny fiainana ho avy koa [=any an-danitra sy any an-koatra any: satria mandalo ny lanitra sy ny tany],.." Ny arkanjely ve no lazainy amin'ireo? Sa misy "zavamanan'aina" hafa, manampahefana sy fiandrianana eto (an-tany ?!?), ankoatran'ireo andriana sy mpanjaka amintsika olombelona?! Samia mandalina isika rehetra....
- Ny azo lazaina aloha, dia tsy miresaka ny eto an-tany intsony i Md Paoly, satria i Kristy efa nitsangan-ko velona, sy efa any an-kavanan'Andriamanitra ny resaka eto (Efez 1, 20): ka ireo izany azo eritreretina tsara hoe "zavamanam-panahy" any an-danitra. Anjely ve sa Arkanjely?!!!...
- Toy izany koa hoe ny asa niandraiketan'izy ireo no anavahana hoe: anjely na Arkanjely izy ireo. Ireo mitondra hafatra manokana, na anankinana andraikitra manokana-lehibe dia antsoina hoe “Arkanjely”: Rafaely (Tobia 3 ss), Gabriely (Dan 8, 16; 9, 21; Lk 1, 19.26), Misely (Dan 10; Joda 1,9; Apok 12, 7). Ao koa ireo anjely fito mijoro eo anatrehan’Andriamanitra, mpitsoka trompetra amin’ny farandro ().
2°- NY FAMPIANARAN'NY OLOMASINA SY NY "TRADITION" ary ny APOCRYPHE (ireo lahatsoratra tsy tafiditra ao amin'ny Baiboly ), no miresaka hoe iza sy iza avy, ary firy izy ireo.
- Singanina manokana eto ny Bokin’i Enòka (I Enaoka: jereo Jen 5, 24): araka ny boky nosoratany, dia fito ny Arkanjely, araka ny filaharany: Uriel, Raphael, Raguel, Michel, Sariel, Gabriel ary Phanouel. Voalaza fa mitoetra manodidina an’Andriamanitra, amin’ny vazantany efatra izy ireo.
Ka arak’ireo fanadihadiana tsotsotra eo ambony ireo dia sarotra ny milaza hoe iza sy iza avy izy ireo, na firy izy ireo.
Avy eo indray dia ireo ihany ve: fito, satria ireo no fantantsika sy “mifanerasera” amintsika ary zakan’ny saintsika!!? Satria tsy hoe izay takatry ny sain'olombelona ihany no misy…
Fivorian’ny anjely alinalina ny any an-danitra (Heb 12, 22): anjely daholo ve ireo sa firy ny Arkanjely…
MARIHINA ihany koa fa betsaka no miresaka anjely sy Arkanjely amin’izao fotoana izao, na ny vahiny aza…
Ny mampalaelo dia ny fomba fandraisan’ny olona sasany azy ireo: noho ny fizahozahoana tafahoatra ao amin-draolombelona dia zary lasa toy ny “mpanompo-mpanampy” fotsiny izy ireo, …
Ny olona sasany aza sahy miteny mihitsy hoe mba hanompo ny olombelona (fotsiny) no naharian’Andriamanitra ny anjely (sy ny arkanjely)….
Ny tena tsara raha tena mino isika, dia ny miantso sy miresaka mivantana amin’izy ireo. Tena marina tokoa manko izay voalaza hoe: ny voasoratra ao amin’ny Baiboly dia ampy mba hinoantsika, fa tsy hoe akory hoe izay tsy voasoratra ao dia tsy misy.
TORITENYPosté par Ra-Hiandry lun., avril 16, 2012 21:20:28
― Tonga “eo anivontsika” i Jesoa rehefa “mihidy ny varavarana”.
“Androtr'izay ihany, izany hoe harivan'ilay andro voalohan'ny herinandro, raha nirindrina ny varavaran'ny trano nivorian'ny mpianatra noho ny fahatahorany ny Jody”.
Mba diniho kely hoe inona no ataontsika rehefa misy fahoriana na zavatra mampatahotra antsika? Moa manao toy ireto mpianatra, miara-mivavaka, manidy trano, manidy ny varavaran’ny fontsika ve isika, ka miantso an’i Jesoa, sa lasa mitotototo atsy sy aroa, mitady vonjy any an-kafa?
Miseho amintsika sy mamonjy antsika tokoa i Jesoa amin’ny zavatra hafa, fa ny tena azo antoka fa ahitantsika Azy, dia ao amin’ny fiombonana lavorary ihany. Tonga eo anivontsika i Jesoa, tonga ao am-pontsika, rehefa mirindrina ny varavarana, ka maharitra mivavaka ao isika. Mba andramo àry izany fa mety ho izay ny anjaranao, ary zarao amin’ny hafa rehefa nahitanao fahasoavana.
― Mitondra fiadanana marina ao am-pontsika i Jesoa.
“Dia tonga Jeso ka nitsangana teo afovoany, sy nilaza tamin'izy ireo hoe: Ho aminareo anie ny fiadanana!”
Marihina kely, fa ao amin’ny Baiboly, ny voambolana hoe “afovoany” na hoe eo “anivo” na hoe “ao anaty”, dia azo adika ihany koa hoe “ao am-po”. Toy izany ohatra rehefa miteny i Jesoa hoe: “Tsy manetriketrika fiavy ny fanjakan’ny lanitra, fa indro eo anivonareo izy”, izany hoe “ao am-ponareo” (Lk 17, 21).
Ka raha tonga àry i Jesoa, mijoro eo afoavoany, sady mirindrina ny varavarana, dia ao am-pontsika avokoa izany rehetra izany no mitranga. Ao rahateo i Jesoa no manome ny fiadanana: ny tena fiadanam-po tanteraka. Ao ihany koa i Jesoa no mitsoka sy mampidina ny Fanahy Masina. Izany rahateo no mahatonga ny hoe ny Fanahy Masina izay monina ao anatinareo (mitoetra ao am-pontsika).
Io rahateo ilay fampianarana tamin'ny karemy hoe rehefa mivavaka ianao, dia midira ao an'efitranonao ary hidio ny varavarana (ao am-ponao), ka ny Ray izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly soa anao.
― Ireo antony ilàna ny tena fiadanana marina avy amin’i Jesoa.
Mampandinika tokoa ny hoe: inona ny lanja sy ny antony ilàna ny fiadanana eo amin’ny fiainam-panahintsika, ka mahatonga an’i Jesoa hanisy tsindrim-peo sy hanasongadina io fiadanana io eto amin’ity Evanjely ity?
Tsara homarihina aloha, fa ny fiadanan’i Jesoa, tsy miankina velively amin’ny zavamanahirana ivelantsika. Tsy hoe nanafoana ny fanenjehan’ny Jody ny fiadanana nentin’i Jesoa, fa mampitony sy mankahery ny fontsika kosa hiatrika ny fanenjehana sy ny mafy rehetra hatramin’ny martiry aza.
Maro manko ny mihevitra, fa mba hananana fiadanam-po dia mila feno fiadanana sy tsy misy mpanelingelina ny fiaraha-monina na ny firenena sy ny tany tontolo.... Dia miady fo handringana sy handresy (farafaharatsiny handresy lahatra) ny ratsy fanahy…. Tsy izany velively anefa ny nataon’i Jesoa, fa navelany hamadika izay te-hamadika azy, navelany handositra ny sasany, navelany handà in-telo ny hafa, navelany, navelany daholo….
Tsarovy ihany koa fa fakam-panahy sy ny fitsapana, ny fanenjehana sy ny faharatsiana dia hisy foana, ary vao mainka hihamafy aza, fa izay mahay mandray ny fiadanan’i Jesoa kosa, hatoky mandrakariva hiatrika an’izany....
Ka ny antony ilàna ny fiadanana àry, arak’izay voasoratra eto, dia azo heverina, fa voalohany indrindra, ilaina ny fiadanana raha te-hanatanteraka ny irak’i Jesoa isika, iraka haka tahaka sy hanaraka Azy. Hoy indrindra ny Evanjely: “Dia hoy indray izy tamin'izy ireo: Ho aminareo anie ny fiadanana! Tahaka ny nanirahan'ny Raiko ahy no anirahako anareo koa.
Manarak’izany, dia mila ny fiadanana isika raha te-handray ny Fanahy Masina mba hahatontosana io iraka io araka ny sitra-pon’andriamanitra. Aorian’ny Paka tokoa, dia asaina isika rehetra tsy an-kanavaka handray ny Fanahy Masina. Mbola maka tahaka izay nataon’i Jesoa isika, amin’izany: notorontoronina noho ny herin’ny Fanahy Masina, feno ny Fanahy Masina tamin’ny batemy tao Jordany, nentin’ny Fanahy nankany an’efitra, ary niasa niaraka tamin’ny Fanahy Masin’Andriamanitra mandrakariva,....sns.
TORITENYPosté par Ra-Hiandry lun., avril 16, 2012 21:15:50
― Ny antony ilàna ny fiombonana lavorary ao amin’ny Soratra Masina.
Mety hihevitra angamba isika, hoe tsy dia ilaina loatra izany fiainana ny fiombonana izany, fa rehefa samy maka ho azy ao amin’ny sakramenta sy amin’ny fanamasinan-tena dia ampy... Ny Soratra Masina anefa mampianatra mandrakariva antsika, fa ao amin’ny fiombonana lavorary ihany no tena ahitantsika sy ihaonantsika amin’i Jesoa nitsangan-ko velona.
I Maria Madelenina ohatra, rehefa irery, dia tsy nahalala avy hatrany hoe i Jesoa nitsangan-ko velona io, fa noheveriny ho mpiandry saha. Toy izany koa ireo roalahy nankany Emaosy (tafasaraka tamin’ireo 11 lahy), voasankana ny masony, tsy hahafantatra an’i Jesoa raha tsy teo am-pamakiana ny mofo, fihetsika izay nanehoan’i Jesoa ny fiombonana lavorary ho an’ny mpianany rehetra....
Amin’ny Evanjely anio indray ohatra, dia tsy niseho tamin’i Md Tomà, (nitokana tany i Jesoa), fa tamin’ny mpianatra tafavory miaina ny fiombonana mandrakariva... Singanina manokana angaha ny fisehoan’i Jesoa tamin’i Simòna Piera, izay tsy voatantara an-tsipiriany akory aza...
Hohitantsika ihany koa fa ireo fotoana manandanja (Andro Fiakarana na ny Fidinan’ny Fanahy Masina,...) dia mitranga mandrakariva ao anatin’ny fahalavorarian’ny Fiombonana amin’ireo mpino. Tena “mampite-hiteny” izany rehetra izany hoe: raha tiantsika hiseho, hitranga sy hiasa eo anivontsika i Jesoa na ny Fanahy Masina, dia iezaho holavorariana mandrakariva ny fiombonana sy ny firaisam-po tanteraka amintsika, fa ho avy tokoa Izy hanova sy hanavao ny fiainantsika, rehefa miray fo, miombom-panahy ary miray saina tanteraka isika. Mbola manana 40 andro indray àry isika hiomanana, hanatsarana sy handavorariana izany fiombonana izany...
― Tsy mavesatra ny didin’Andriamanitra: ny fomba fijerintsika no mampahavesatra na manamaivana an’izany.
“Fa ny fitandremana ny didiny no fitiavana an'Andriamanitra, ary tsy mavesatra ny didiny”. (Vakiteny II)
Resahina kely ity fitandremana ny didim-piombonana lavorary ity satria matetika manahirana antsika, sady sarotra ho antsika ny manatanteraka azy. Mazava anefa ny tenin’Andriamanitra, fa tsy mavesatra ny didiny: “maivana sady mora entina ny jiogako” hoy i Jesoa (Mt 11, 30).
Diniho tokoa àry, fa ny mampahavesatra ny didin’Andriamanitra dia ny fomba fijerintsika mitanila, mijery fotsiny ny fahasahiranantsika manatanteraka ny didin’Andriamanitra fa tsy mba mijery ihany koa ny tombontsoa be lavitra azontsika amin’izany. Raha tiantsika ohatra ny hanatanteraka zavatra iray, eo amin’ny fiainana, dia ny tombontsoantsika avy amin’izany ihany no tokony hifantohantsika fa tsy izay mety ho fahasahiranana eo am-panatanterahana izany: “Tsy ny fositra no tsy ambolem-boavary” hoy ny Ntaolo.
Tsarovy fa isaky ny manatanteraka ny didin’Andriamanitra isika, isaky ny mamela ny hafa, isaky ny mandefitra sy miaritra, isaky ny mivavaka ho an’ny mpanao ratsy antsika, isaky ny mahafoy ho an’ny hafa, sns... dia manamaivana ny fo amam-panahintsika sy mampisondrotra azy ho amin’ny ambonimbony sy “akaikikaiky” kokoa an’Andriamanitra.
=> Ka inona àry no tena tiantsika ho azo: ny fisondrotan’ny fo amam-panahintsika (ny fahamasinantsika) miaraka amin’ny fahasoavana raisin’ny hafa (heverintsika ho fahavalo sy izay manao ratsy antsika) ve, sa ny misakana izany fahasoavan’ny hafa izany, sady manavesatra rahateo ny fo amam-panahintsika, mba samy ho “tavela” isika rehetra? Tadidio, fa ny lolom-po, ny hatezerana, ny lonilony, ny tsy famelana, ny fialonana sy izay mety ho fahotana rehetra ataontsika, dia manavesatra ny feon’ny fieritreretana sy ny fo amam-panahintsika.
Isaky ny tsy tia ny hafa tokoa isika, isaky ny tsy miraharaha, isaky ny mialona sy mankahala, dia misakana ihany koa ny fahasoavana tokony horaisintsika avy amin’Andriamanitra: ary marina mandrakariva izany amin’ny lafiny rehetra. Izany rahateo no maha-Andriamanitra be famindram-po sy manankarem-pahasoavana azy, izany rahateo angamba ny hoe “ny fihevitro tsy fihevitrareo...”
Ho maivana amintsika àry ny didin’Andriamanitra raha ny fahasoavana miampy fahasoavana miavosa horaisintsika no ifantohantsika, fa tsy izay tombontsoa sy fahombiazana kely mandalo, azon’ny hafa “ratsy fanahy” amin’ny fahotana namelezany sy nahavoazany antsika...
TORITENYPosté par Ra-Hiandry lun., avril 16, 2012 21:08:50
― Ny vokatry ny Paka dia ny fiombonam-po sy fiombonam-panahy.
“Ary niray fo sy fanahy avokoa ny mpino rehetra”. (Vakiteny I)
Eto am-piandohana, dia mampianatra antsika ny vakiteny voalohany, fa ny fiombonana tanteraka no fahasoavana voalohany raisina avy amin’ny Paka: fiombonam-po amam-panahy. Izay avy nankalaza ny andro sy ny herinandron’ny Paka, nefa tsy mahazo ny hevitr’izany sy tsy miaina fiombonana izany, dia toy ny tsy mino sy ny tsy mankalaza ny Paka ihany. Sady ambonin’izany, isika rahateo efa nomena havaloana be izao, handinihina sy hahazoana tsara ny hevi-dalina sy ny fahasoavana fonosin’ny Fitsanganan-ko velona. Izany no mahatonga ny hoe: ny vakiteny tamin’ny Herinandro Masina sy ny Paka ihany no averina vakiana mandritra ny havaloana fankalazana ny Paka.
Mila aseho sy iainana anefa izany fiombonana lavorary izany, fa tsy vitan’ny inoana ao an-tsaina sy ao am-po fotsiny. Ho an’ny mpino tamin’izany andro izany àry, dia ny fifampizaràna ny fananana ara-materialy no nanehoany an’izany. Ho antsika ankehitriny kosa mba inona? Mazava loatra fa tsy miova ny hevi-dehibe: fiombonana tanteraka, fa ny fomba fanehoana an’izany kosa no miova araka ny toerana sy ny fotoana sy ny zava-misy iainana.
=> Samia àry mikaroka izay fomba anehoany an’izany fiombonam-po amam-panahy izany. Ny Fiangonana ohatra, dia efa miezaka manolotra antsika safidy samihafa mba hahafahantsika miaina izany. Eo ny fidirana ho mpikatroka amin’ireo Fikambanana masina isan-karazany, eo ny fandraisana anjara amin’ireo herivelona ao amin’ny Fiangonana: komity sy vaomiera isan-tokony, ary eo ihany koa ny fiaraha-mientana amin’ny fankalazana ny “andro” sy rakitra samihafa (andron’ny Tanora, andron’ny fiantsoan’Andriamanitra, andron’ny marary hoditra,.... Rakitra ho an’ny tany masina, rakitra ho an’ny Papa, sns...).
Raha tsorina, dia tsy ampy velively ny mamonjy lamesa sy ny fotoam-pivavahana dia mody, miolonolona irery any, fa ilaina ny fiombonana aseho amin’ny endrika hafa. Mahagaga tokoa fa raha tokony ho fara-tampon’ny Fiombonana ny Fankalazàna ny Sorona Masina, dia lasa toa zary maivan-danja izany fiombonana izany ao amin’ny Sorona Masina, miohatra amin’ireo fotoana hafa....Matetika dia mahatsiaro “mifanakaiky am-po sy am-panahy” kokoa ny olona any amin’ny fotoana sy fihaonana hafa... Asa, ... samy maika hody ve ao amin’ny Lamesa?....
― Ny Fiombonana lavorary no “faratampony” ho antsika kristianina.
“Izay rehetra mino fa i Jeso no Kristy, dia naterak'Andriamanitra; ary izay rehetra tia ilay niteraka azy, dia tia azy naterany koa. Ny marika ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika, dia ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fitandremana ny didiny”. (Vakiteny I)
Rehefa mandinika ny Soratra Masina tokoa, dia tsapantsika fa tena zava-dehibe ny fiombonana lavorary ho an’ny mpino. Androany ohatra, raha miresaka amintsika i Md Joany ao amin’ny vakiteny faharoa momba ny fitiavana an’Andriamanitra sy fitandremana ny didiny, na koa ny hoe mandresy ny ratsy sy ny fahotana, dia hohitantsika fa ny Fiombonana lavorary ihany no ao ambadik’izany rehetra izany.
Inona tokoa moa ny didy lehibe sy vaovao nomen’i Jesoa antsika, raha tsy ny fifankatiavana (fiombonam-po,...) ao amin’ny fifanompoana sy ny fahafoizana (service et sacrifice), toy izay nasehony tamin’ny Alakamisy Masina?
Ary inona ihany koa no fandresena izao tontolo izao sy ny ratsy rehetra raha tsy ny fiombonana lavorary amin’Andriamanitra sy ny namana? Ny fahotana tokoa no mampisaraka antsika amin’Andriamanitra sy ny namana, fa ny fitiavana sy ny finoana kosa, dia mampiombona antsika mandrakariva. Ka raha resin’i Jesoa ny fahafatesana, dia midika izany fa resy ihany koa izay fisarahana heverintsika olombelona ho mafy indrindra (ny fahafatesana), fa manjaka kosa ny fiombonana feno sy lavorary tanteraka eo amin’ny lanitra sy ny tany, eo amin’ny samy olombelona, fa indrindra eo amin’ny olombelona sy Andriamanitra: “Triatra hatrany ambony ka hatrany ambany ny efitra lamba tao an-toerana masina indrindra, tao an-tempoly” (Mt 27, 51; Mk 15, 38; Lk 23, 45; He 6, 19). “Rehefa tafasandratra hiala amin’ny tany aho hoy i Kristy, dia hitarika ny olon-drehetra hanatona ahy” (Jn 12, 32).
TORITENYPosté par Ra-Hiandry ven., mars 30, 2012 00:22:06
ALAHADY KAREMY-5-11, TAONA B
- Tsy ny herintsika irery intsony no manome voninahitra an’Andriamanitra.
Raha fintinina àry izay voalaza rehetra izay, ka ampifanohizina ireto tenin’Andriamanitra ireto, dia izao no azo ambara.
Tapakevitra tanteraka Andriamanitra hanao Fanekempihavanana vaovao amintsika, ka any amin’ny lalina indrindra, any amin’ny “maharary” antsika, any amin’ny fontsika mihitsy no anoratany an’io fanekempihavanana vaovao io.
Tsy maintsy miainga avy ao am-po tokoa manko ny zavatra rehetra, raha tiana hahitam-pahombiazana.
Ary ny lalàna hosoratany ao am-pontsika, dia tsy inona fa ny lalàn’ny Fiantorahana tanteraka sy ny fanekena lavorary, n’inon’inona mitranga, hatramin’ny fahafatesana aza.
Ary ireo ihany no antoka ahavitantsika mahafoy sy manaiky ho faty, mba hamokatra bebe kokoa ho an’ny famonjena antsika sy hafa. Dia ireo ihany koa no antoka hahavitantsika mikatsaka sy manatanteraka mandrakariva ny voninahitr’Andriamanitra amin’ny fandresena ny ratsy rehetra afitsok'i satana ilay mpanapaka an'izao tontolo izao.
=> Hotanteraka amintsika anie izany rehetra izany. Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina….
TORITENYPosté par Ra-Hiandry ven., mars 30, 2012 00:15:15
ALAHADY KAREMY-5-09, TAONA B
- Ny ora-(fotoana)n’ny fanomezamboninahitra, ny tena voninahitra marina.
“Tonga ny fotoana hanomezam-boninahitra ny Zanak’olona. Raha misy manompo ahy, dia homen’ny Raiko voninahitra izy. …. Raiko ô, omeo voninahitra ny anaranao..... Efa nomeko voninahitra izy, ary mbola homeko voninahitra indray.”
Dia iaraha-mahita tokoa fa resaka fanomezamboninahitra no tohin’ny tantara. Ary tsy ny Ray, na i Jesoa ihany no voakasik’izay fanomezamboninahitra izany, fa ny mpino rehetra manaiky an’i Jesoa ihany koa: “Raha misy manompo (mihaino sy manaiky) ahy, dia homen’ny Raiko voninahitra izy.”
Ny fomba fanomezamboninahitra anefa no tsy araka izay mahazatra ny olona. Ho an’i Jesoa, ny hoe manome voninahitra dia tsy ny manangona (maka, mangorona, manao am-pihimanba) ho an’ny tena irery, fa ny manome sy mizara ary mahafoy ho an’ny hafa. Tsy hoe tia tena samy maka ho azy, fa mahafoy hatramin’ny aina: “Lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy maty ny voam-bary nafafy tamin’ny tany, dia mitoetra foana izy: fa raha maty kosa izy, dia mahavokatra be. Izay tia ny ainy no hahavery azy; fa izay mankahala ny ainy amin’izao fiainana izao no hitahiry azy ho amin’ny fiainana mandrakizay.”
=> Aoka àry isika mba tsy hisy hitaraina intsony rehefa mba misy “occasion”- fijaliana na fitsapana atolotr’i Jesoa antsika eo amin’ny fiainana. Ny dikan’ireny manko dia ny mba hahafahantsika manome voninahitra an’Andriamanitra, no sady ahafahantsika ihany koa mitahiry ny voninahitra ho antsika, izay haseho miharihary amin’ny fotoana mahamety azy. Tena zavatra efa diso fantantsika izany. Na ireo mahery fo maty ho an’ny tanindrazana aza, eny fa na dia ireo mpiasampanjakana, nahafoy tena niasa tsara sy maharitra ho an’ny firenena, dia tolorana mari-boninahitra amin’ny fotoan’androny.... Mainka ve fa isika mahafoy ny zavatra rehetra ho an’i Jesoa....